ကျွန်တော်နှင့် Cabonara အလွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကျွန်တော်နှင့် Cabonara အလွဲ
ကျွန်တော်နှင့် Cabonara အလွဲ
Posted by sorrow on Nov 14, 2014 in My Dear Diary | 29 comments
.ရောက်နေတဲ့နေရာ ..ရနေတဲ့ရာထူး..စားနေတဲ့လစာ …
.ဒါပေမယ့် သေချာသိတဲ့ အမှန်တရားက
.မင်းမရှိရင် ငါဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ဖြူဖွေးလေးရယ်…
သူမသည် Italian pasta ထဲတွင် Cabonara ကိုကြိုက်သည် ။
ရံဖန်ရံခါ Bolognese sauce ကို extra cheese နှင့်ကြိုက်သည် ။
Spare rib ကို ၀ိုင်နှင့်မြည်းစမ်းရသည်ကို သဘောကျသည် ။
Tomato Cream Cheese Soup ကိုအသကုန်သမသည် ။
ထို့ကြောင့် ပေါင် ၁၃၀ နှင့် Aisle ပင် မဆန့်သော လေယဉ်မယ် ၀၀ကြီးဖြစ်နေလားတော့ မပြောတတ် …အဟိဟိ
ရံဖန်ရံခါ ကျွန်ုပ် ကျီစားတတ်သလို…သူမမျက်ဝန်းရွှန်းရွှန်းလေးကို ငေးရင်း
“ဘာ စိုးကြီးလဲ …ကိုကိုနော်.” လေသံက ချက်ချင်းပင် မုန်တိုင်းသံစဉ်သို့ပြောင်းသည်
“ကိုကို လဲ စိုးပဲလေ….သို့သော် စိုးသူ ..အငိငိ ”
သူမသည် စိုးမြတ်သူဇာကဲ့သို့ XXL ဆိုဒ်ကြီးဖြစ်နေပြီး
ကျွန်ုပ်က စိုးသူကဲ့သို့ အရွယ်တင် နုပျိုပါသည် ဟူသော အထာ….
လက်သီးဖြူဖြူလေး ၀ဲတက်လာသည် ။ ကြယ်နှစ်စင်းကြွေသည် ။
Keep your eyes wide open before marriage , half- shut afterwords, ဆိုစကားကဲ့သို့ …
လက်မထပ်မှီ သင့်မျက်လုံးကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပါ .. လက်ထပ်ပြီးနောက် တ၀က်ပိတ်ပါ ဟူသကဲ့သို့ .
..ကျွန်ုပ်သည် လက်မထပ်ခင်ကတဲ့ မျက်လုံးတဖက် ပိတ်သွားသူဖြစ်ပါသည် ။
ညနေခင်းသည် ထိုသို့ စတင်ခဲ့ပါသည် ။
”ဘေဘီလေး…ဘာသွားစားမလဲ ငင် .” လေသံကို အချိုသာဆုံးထားပြီး မေးလိုက်သည် ။
” Cabonara လေးရယ်…ခရမ်းချဉ်စွပ် ချဉ်ချဉ်လေးရယ်…Spare rib ရယ်…Cocktail က Pink Lady ”
မဆီမဆိုင်…မမခိုင်ဇာ ကို သတိရလိုက်သည်။ လိုက်ဖက်ညီလိုက်မယ့် ညီအစ်မ…အငိငိငိ…
ထို့အပြင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ် အားနည်းသည့် ..ချစ်ခင်လေးစားရပါသော
.ရဲတိုက် ညီအရင်းဖြစ်သော…မားကတ်တာဆရာသမား ဆေးထိုးသည့်အတိုင်း…
” အစ်ကို ..ကျော် ဒီနေရာတော့ ဖြူဖွေးဘက်ကပါရလိမ့်မယ်….ငါ့ညီမ.
..ဟိုဆိုင်က ဟိုအစားလေးတော့ ကောင်းသဗျ ” စသည်ဖြင့် .
..ကျွန်ုပ်ပိုက်ဆံအိတ်ကို တစ်ဖက်တလမ်းမှ မပါးပါးအောင် ကူညီစောင်မလေသည် ။
စာဖတ်သူများခင်ဗျာ …အစ်ကိုကြီးရဲတိုက် ၀င်သွားသော်လည်း
…ညီလေးထံတွင် ပစ္စည်းများကျန်ပါသေးသည် ။ လိုအပ်ပါက ဆက်သွယ်ကြကုန်…
( ကင်မလာ ပစ္စည်းများပြောပါတယ် ).အဟိဟိဟိ…
အနှီ ..အစားအသောက်အရာတွင် ..ဘီလူးရှုံးသော အမျိုးသမီးကလဲ
…တရားခွေ ဖွင့်သကဲ့သို့ နန်းစတော့ ညောင်ပါတော့သည် ။
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတခုကို ပြင်ဆင်ပြီး ဥရောပ ခရီးသည်များကို ဆွဲဆောင်ထားသည့်
အပြင်အဆင်ရှိသည့်နေရာ …ထောင့်ချိုးလေးတွင်နေရာယူလိုက်သည် ။
“” ကိုကို…ချိတယ်… “” တစ်ခွန်းသာပြောပြီး …Selfie ရိုက်လေတော့သည်…
Kind words are worth much and cost little … ကြင်နာသော စကားလုံးများသည်
တန်ဖိုးများစွာရှိပြီး အခနည်းသည် ဆို သော စကားပုံကို တီထွင်ခဲ့သည့် ငနဲများ….
ကျွန်ုပ်ကို လာရောက်ကြည့်ရှုပါ… ။ ပြီးရင် မှားကြောင်းဝန်ခံပါ…ဗြဲ
မကြာ ..ဟင်းပွဲများရောက်လာလေသည် ။ သူမခဗျာ မစားနိုင်သေး.
…ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ဖေ့ဘွတ်တင်ရန် အသည်းအသန်ပြင်ဆင်လေတော့သည် ။
” ဟိုအမျိုးသမီး…ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ် အမုန်းခံချင်မနေနဲ့ …ကြွားစိန်လုပ်တာ နေရာတကာမကောင်းဘူး. ဖေ့ဘွတ်သုံးရင်း ဗိုက်ဆာနေတဲ့ လူတွေ့ရင် အလွတ်ကြီးကျိန်စာတိုက်နေမယ်…..”
မျက်စောင်းတချက်ဆောင့်ထိုးခံရသည်သာ အဖတ်တင်သည် ။
“ဟင်…ဘာကြီးတုန်းဟ…” သူမ ယောင်ယမ်းရွတ်ဆိုမိလေသည် ။
‘’ Tomato Cream Cheese လား ..ခရမ်းချဉ်သီး ပန်ထွေဖျော်လား ‘’
ဟုတ်လဲဟုတ်သည် … တိုရှည်စားသည့်အခါတွင် အခမဲ့ထည့်ပေးသော
ခရမ်းချဉ်သီးချက်ကဲ့သို့သော ..ဟင်းရည်တွင် Cheese Cream တင်ထားသကဲ့သို့…
ချဉ်တူးနေသည့် ဟင်းရည်ကို သူမ စိတ်နာသွားသည်
ထိုမျှ ပြီးသလားဆိုတော့ မပြီး…
Cabonara ရောက်လာပါသည် ။ တပွဲ ဆယ်ဒေါ်လာတန်သော အနှီ ခေါက်ဆွဲပွဲမှာ ခေါက်ဆွဲဖတ်နှင့်
Mayonnaise ရောနယ်ထားသော အရသာ သက်သက်သာ ဖြစ်သည် ။ဘာ Bacon မှလဲမပါ ။
“ပြောတော့ Ham & Bacon ဆို “”
“” အစ်မ..ကြိတ်ပြီးထည့်ထားတယ် “” တစ်ခါမျှပင် မကြားဖူးသဖြင့် …ဖြူဖွေး ဆွံ့အသွားသည် ။
သူမ မုန်တိုင်းမလာခင် ခဏတာ ငြိမ်သက်သွားသလိုမျိုး….သူမသည် အစားအသောက်အတွက်
လူ့အသက်ကိုပင် ရန်ရှာရဲသည့် ခြင်္သေ့ပျိုမလေးဖြစ်သည် ။
“” Baby ..to forgetawrong is the best revenge “”
ပီသကြည်မြသည့်  အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် ပြောကြည့်ပါသေးသည်
“Good morning ladies and gentle men “ စသည်ဖြင့် အနောင့်မန့်ရွှတ်တတ်သော လေယဉ်မယ်လေးမှ….
“Could you please shut up ” ဟူပြီး သွားကြားထဲမှထွက်လာသည့်လေသံဖြင့် ကျိန်းဝါးလေသည်
(အဟိဟိ..အပေးအယူမျှတာ ပြောပါတယ် )
“အသဲလေးရယ်…ရိုးမန့်လာလုပ်တာ..စိတ်ညစ်မခံနဲ့ ..နောက်တစ်မျိုးမှာလိုက် ..””
လေသံပြော့လေးဖြင့် တောင်းပန်လိုက်သည် ..မရ
“ မမှာဘူး..ပိုက်ဆံအလကားရသလား…ဈေးကြီးပေးထားပြီးတော့ ..တောက်”
waiter မလေး ကြောက်လန့် တုန်လှုပ်နေလေသည် ။ ဖြူဖွေးကဲ့သို့အကောင်းကြိုက်သည့်
အမျိုးသမီးလိုအပ်ချက်နှင့် နက်ရှိုင်းစွာကွာခြားသော အစားအသောက် အရသာကို ..
ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော ..ပဲပုတ်နှင့် ထမင်းကြမ်းစားလာသော တောသားပင်မစားနိုင်…ထိုမျှ ကောင်းမွန်ပါသည် ။
Who Ventures Win. မဟုတ်လား..ကျွန်ုပ်သည် ရဲရင့်စွာဖြင့် တိတ်တိတ်နေပြီး အနိုင်ယူလိုက်သည်
..( အငိငိ ..ငါကွ ဆောရိုး…နောက်ဆုံးတော့ ငါပဲအောင်ပွဲတွေတပွေ့တပိုက်နဲ့ ပြန်ရတာ…)
“ငါတခါမှမကြားဖူးဘူး…သွား Kitchen ကို Ham ရယ်..Sausage ရယ်…အဲ့တာတွေသွားထည့်ခိုင်းလိုက်..ကျသလောက်ပေးမယ်”
သူမသည် မီးတောင်တလုံးဖြစ်သည် ။
ဒေါသဖြင့် တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော ချစ်သူလေးက cocktail ကိုကောက်မေ့လိုက်သည် ။
“ထွီ…ဘာကြိးတုန်း” သူမသည် ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပါ ။
အမှန်တကယ်ကို Pink Lady သည် ဂျင်နှင့်မဟုတ်ပဲ…
ဘီအီးနှင့်ေ၇ာစပ်ထားသကဲ့သို့ အရသာသည် ကောင်းမွန်ပါသည် ။
(အဟိဟိဟိ..ကြိုက်ချင်အုံးလေ…ငလို .၀က်ခေါက်နဲ့ ချဉ်စပ် လိုက်စားရင်ပြီးရော..အငိငိ )
ထိုကဲ့သို့ မပြောရဲပါ ။ ဒေါသဒီရေသည် အချိန်မရွေး ကျွန်ုပ်ဘက်လှည့်လာနိုင်သည် မဟုတ်ပါလော ။
Cabonara သည် တကျော့ပြန်ရောက်ရှိလာသည် ။
“ဟင်…” သူမသည် တိတ်ဆိတ်ဆွံ့အသွားသည် ။
Cheese နှင့်ရောထားသော ခေါက်ဆွဲဖတ်ပေါ်တွင် ..တင်ပေးလိုက်သော
…ပျော့အိနေသော ..အဆီတ၀င်းဝင်း ၀က်ဆီဖတ်များ….၀က်အူချောင်းနီနီရဲရဲကြီးများ …
သူမဒေါသသည် အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်လေသည် ။
A hungry man is an angry man ဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ်အယုံအကြည်ရှိပါသည် ။ အဟိဟိဟိ
အိမ်ပြန်သည့် လမ်းတလျောက်လုံးတွင်လည်း .
“” ကိုကိုရယ်…နှမြောလိုက်တာ …နှမြောလိုက်တာ .. ကိုကို့ GM လစာကဖြင့် နှစ်ပဲခြောက်ပြားနဲ့ … “”
စသည်ဖြင့် လူတစ်ဖက်သားကို မထိခိုက် မနစ်နာစေပဲ ..ပြောလေသည် ။
ဆိုမှ နည်းနည်းတိတ်သည် ။
ထိုနေ့ညသည် ထိုကဲ့သို့ ရိုးမန့်ဆန်စွာ ဇတ်သိမ်းခဲ့ပါသည် ။
အဲသည့်… ဖွဘုတ်မှာ အစားအသောက်ဓာတ်သေတင်ကြတာ ကျောက်စ်အားကြီးစိတ်တိုတယ်….
နေ့လည်ထမင်းစား အိမ်ပြန်ချိန် ၊ မနက်က အသင့်ပြင်ထားတာလေးတွေကို ကသောကမြောချက်…
ချက်ပြီးလို့ စားပါမယ်ဆိုမှ ဓာတ်သေရိုက်တာ ဆာဆာနဲ့ ထိုင်စောင့်ရတယ်… တောက်စ်
ကြူ စရာ မရှိရှာသူတွေခမျာ
..အောင်ရဲလင်း…ခင်ဗျားလေး အဲ့ဆိုင် ဖွေးဖွေးနဲ့သွားရင် ( သို့ ) ရည်းစားရရင် ကျော် ..စပွန်စာပေးပါ့မယ်…အတည် …
..ကျောက်စ်…အစ်ကိုပဲ ကျော့်ကိုအပြည့်အ၀နားလည်ပေးတယ်..အဟိဟိ..ဘယ့်နှယ့်ဗျာ ..ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် အမုန်းခံချင်ရတယ်လို့ …
..ဆြာသမား.. မသိတာလဲမဟုတ်..ကျုပ်မှာပေးတာလား..သွသူ ..နန်းစတော့မှာတာလား..အသိဆုံး..နော်..အငိငိ
..ကောင်းကင်ပြာ..သြော်ရယ်..ခင်ဗျားလေးက နားမလည်ရှာဘူးကိုး…တကယ်က အီးလိုရေးတာက ..အထင်များကြီးသွားမလားလို့ ..စာအုပ်ထဲက ကူးချတာ..အဟိဟိ
..အစ်ကို ..အချင်းချင်းမို့ ပြောပြပါအုံးမယ်..ကြူစရာမရှိရင်..
. 1) လိုက်ဖမ်းရတယ်ခင်ဗျ
. 2) လိုက်မဖမ်းချင်ရင် ..ထောင်ဖမ်းရတယ်ခင်ဗျ …
. 3) တော်ကီပိုင်း ဟိုမာကတ်တာလေး ဆီမှာသင်ပါ ခင်ဗျ..
.4) တက်ကနစ်ပိုင်း…တောင်ကျွန်းက ပရောဂျက်မန်နေဂျာ ဘဘကြီး ဆီမှာသင်ပါခင်ဗျ အဟီး…
အူးကျောက်စ်နဲ့ ဘွတူတစ်ယောက် ရဘီ…
အီးဂလိပ်လိုတွေပါ ပါတော့ အတော်လိုက်ဖတ်ရတာ ဖတ်ဖတ်မောသွားတယ်….။ (ညန်မာလို ပြန်ထားလို့ တော်သေး…)
ခြသေ့င်္ပျိုမလေးပုံကို ရှင်းကနဲ လင်းကနဲ ဘွင်းကနဲ….
အစားအသောက်တွေ အရသာခံနည်း သင်လား သင်ပေးရဲ့
ပီးတော့ လိုက်ကျွေးလား ကျွေးရဲ့ ….
အဲ …နောက်ဆုံးကျမှ စားလေခြင်း ၀လေခြင်း ဆိုပြီး
သူများသားသမီး ကို အပြစ်တင်လား တင်ရဲ့ …
ချစ်တီးမကြီး ဆိုပြီး နာမည်ဖျက်လား ဖျက်ရဲ့ …..
ဒီ ချစ်တီးမကြီးပဲ လှည့်ပတ် အပုပ်ချနေတယ်
တူ့ခညာ သနားစရာ :mrgreenn:
ယူအက်စ်ကတော့.. အဖြူမလှလှတွေ..အပြိုင်အဆိုင်.. အငတ်ခံကုန်သဗျ..။
Boycott Urban Outfitters- T-shirt promotes Eating Disorders …
This T-shirt is subtly promoting eating disorders.In… … Sophia Bush Outraged Over Urban Outfitters’ ‘Eat Less’ T-Shirt & Calls For A Boycott! Will You Be Jo.
၀လည်းဝရဲ့..။ စိတ်လည်းပုတ်ရဲ့..။ စွတ်ဟောက်နေတတ်တာ…။
နောက်ဆို.. ငပိရည်ပုလင်းဖွက်ယူသွားပြီး.. စပါဂတီပေါ် လောင်းချပေးလိုက်..။
..၀လည်းဝရဲ့..။ စိတ်လည်းပုတ်ရဲ့..။ စွတ်ဟောက်နေတတ်တာ အဲ့တာ အစိုးရလေကြောင်းလိုင်းမှာ.ခင်ဗျ. ။ …တခြား ပုဂလိက အဲလိုင်းကဟာလေးတွေက အလန်းလေးတွေ…အဟိဟိ..
မြန်မာပြည်က အဲ့ဒီစားသောက်ကုန် ၀န်ဆောင်မှု ဘယ်ဆိုင်မှသဘောမကျဘူး
အဲ့လိုဆို ကျူပ်လုပ်နေတာလဲ ၀န်ဆောင်မှုအပြည့်လား မေးစရာရှိမယ်
ဒါပေမယ့်စားသုံးသူနဲ့ ၀န်ဆောင်သူအကြားက Ethic လေးတစ်ခုအကြောင်း နည်းနည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြစ်အောင် စာတစ်ပုဒ်စုဆောင်းနေတယ်။
ဟုတ်သော်ရှိ၊ မဟုတ်သော်ရှိ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ရှင်မဟုတ်တောင်မှ ဆိုင်ရှင်လုပ်မယ့်သူတွေ၊ လုပ်နေတဲ့သူတွေ ပိုပြီးစားသုံးသူတွေကို နားလည်လေမလားလို့ရယ်သက်သက်ပါ။
..ကိုကြီးစိုင်း.. waiter ရော.. chief ရောမှာတဲ့ item ကို သေချာနားမလည်တာပါခင်ဗျ.. ..ဆိုတော့မရှင်းပြတတ်ဘူးရယ်….ဒါတောင်အဲ့ဆိုင်ကမြန်မာမှာ ..အကောင်းဆုံးထဲမှာပါတယ်တဲ့ဗျ… ..လက်ကိုလန်ရော …ကျော်ကတော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်..ကျော်လဲ အရင်က ဘောက်ဆူးမျှော်တတ်တဲ့ ..စားပွဲထိုးပဲကိုး
“လေယာဉ်ပေါ်က အစားကောင်း တွေ နဲ့ ယှဉ် မကြည့်ပါနဲ့ ကွာ အချစ်လေးရာ” လို့ ချော့ ပြောရတယ်ကွဲ့။
..ကို ကပ္ပိယကြီး ..ကျော်ပဲမမြင်မိတာလား ..အစ်ကိုပဲပျောက်နေသလားခင်ဗျာ ..လာအေးပေးသွားလို့ ကျေးကျေးပါဂျာ ..
အဟိ… ဘယ်​ဆိုင်​တုန်း… ​ရှောင်​လို့ရ​အောင်​.. L´opera ​တော့ကြိုက်​တယ်​… နာ့​မောင်​​လေး.. အ​ရေးအသားပို​ကောင်းလာတယ်​.. :-))
.ဒီလောက် အပုပ်ချနေရင် ဖြူဖွေးကို အော်မေ့ဂိုဏ်းထဲ .
.ဒါ့ထက် ကျုပ်တို့ကိုရော အဲသဟာတွေ စားဖူးတယ်ရှိအောင် လိုက်ကျွေး ချင်စိတ်မရှိဘူးလားဟမ်။
..အောင်မငီး… ဖြူဖွေးကို အော်မေ့ဂိုဏ်းထဲ .တော့သွင်းရဘူးလေ… ..တီဒုံရယ်..မေးမှမေးရက်ပါ့..အားတဲ့ရက်သာပြောပါဗျ…
အဲဒီလို အထူး Occasion မျိုးမှာ ၊
ကိုယ် မကျွမ်းဝင်တဲ့ / မသေချာတဲ့ ဆိုင်ကို မသွားသင့်ပါ ။
” ဟိုအမျိုးသမီး ..ငါကားပေါ်ကခုန်ချရမလား…တိတ်တိတ်နေပေးမလား ”
အသုံးအနှုံး က နဲနဲ လွဲနေသလိုဘဲ ၊ တကယ်ပြောရမှာက ၊
” ဟိုအမျိုးသမီး ..ငါကားပေါ်ကကန်ချလိုက်ရမလား…တိတ်တိတ်နေပေးမလား ”
အဲ့ဂလို ပြောတာတွေဘဲ ကြားဖူးပါတယ် ။
..အဲ့ဆိုင်လေးက ဟောက်စ် ၀ိုင် လေးကောင်းတာရယ်…နေရာလေးကအတော်အေးဆေးတာရယ်ကြောင့် ..သွားနေကြပါ အဘရယ်..စာဖိုမှုးကလဲ မြန်မာမှာအတော်ဆုံးထဲပါတယ်ပြောတယ်…ဒီရက်မှ ..ဘာထဖောက်တယ်မသိ.. ကြည်သာမရတာ.. ကန်တော့မချရက်ပါဘူးအဘရယ်…အဟိဟိဟိ…
ဖြူဖွေးလေးကို ကလူသလိုလိုနဲ့ ငြူ စူနေပါလား…
.. အဟိဟိ..ယူရိုပီယန်စာများ စားရရင် ကျော်က ..ဆားဖြူးစားတာ…ဂြိုဟ်သားတစ်ကောင်လိုကြည့်ခံရတယ်ဂျာ..ကြေကွဲ…
ဟိဟိ…sea trial သွားတုန်းက အီတလီ စားဖိုမှူး​တွေချက်​တာ မစားနိုင်​တဲ့ ကို​ရွှေမြန်​မာ​တွေ ငပ်ိ​ကြော်​ဗူး​တွေထည့်​လာတာ​တွေ့ဖူးတယ်​။ ကိုယ်​ချင်းစားပါတယ်​။ကိုယ်​လည်းကြိတ်​မှိတ်​တီးရတာ။ အချဉ်​ကြိုက်​တဲ့သူဆို​တော့ ကာ ဗီနီဂါမျိုးစုံနဲ့နှစ်​ပါးသွားခဲ့လိုက်​တယ်​။ crew အင်​ယာ​လေးက တအံ့တသြနဲ့ ဗီနီဂါ ပုလင်း​တွေလာ​ပေးရင်းနဲ့ နင်​က ဗီနီဂါ​တော်​​တော်​ကြိုက်​တယ်​နဲ့တူတယ်​ ဆိုပြီး…
မဟုတ်တာများဆို နာ့ ကို အရင် သတိ ရ သိလားးး ကချင်ကောင်။
နိ ကို ဖုန်းနံပတ် ပေးထားတယ်။
နာ့ ပိုင်နက်ရောက်လို့ နာ့ လာပြီး ဘီယာမတိုက်ရင် နိဆီကို လူမိုက်တွေ လွှတ်လိုက်မယ်။
ပုံ/ ဆင့်ကာပူရ ရာဖီးယားးး ခေါင်းဆောင်
..ဒီအစ်မပဲရှိတာကို ရောက်တာနဲ့လာရောက် ဂါရ၀ပြုပါ့မယ်ခင်ဗျ..အဆီပိတ်စာတွေလဲ ..လိုက်ကျွေးအုံးမှာ…အဟိဟိဟိ…
စာထဲမှာတောင်အနိုင်မယူရဲ ပြားပြားမှောက်နေသော ကချင်လူဇွမ်းကောင်းကြီးပါတကား